Malunga nathi -Fuzhou Juan Juan Iimveliso ezingalukanga Co., Ltd.
UJuan Juan ngoyena msulungekisi ucocekileyo kunye neetawuli. UJuan Juan. Iqhubekile nokuvela ukusukela oko saqala ngo-2010. Okwangoku ikomkhulu leFuzhou, China, ilifa lethu kunye nekamva lethu lifakwe kwimishini yethu yokuba ngumnikezeli ophambili wezinto ezingabalulekanga zokusula okususelweyo kunye neetawuli zomqhaphu kwiimarike. Njengomlingani we-OEM kwiimveliso ezinkulu zehlabathi, Sinika umgca opheleleyo wee-8 ngokuzenzekelayo kwimveliso yokuvelisa i-touch wipes kunye ne-othomathikhi ngokuzenzekelayo yokugcwalisa umgca wokuvelisa umgca we-canister uhlobo lwe-disinfecting ukusula kunye nokusula utywala kunye ne-HDPE yethu yokubumba kunye ne-PP Imveliso yemihla ngemihla yimiqulu engama-250,000 / yee-canisters.
Umzi-mveliso wethu uyathenjwa ziihotele ezininzi ezinkulu e-China kunye nabathengisi ekuhambiseni iimveliso zodidi lokuqala kubandakanya ukusula kosana, ukusula izithambiso, izicwili zangasese ezifumileyo kunye nokusula indlu, iirag, iitawuli, njl. kule minyaka ilishumi idlulileyo, kodwa sisebenza ngumoya ofanayo wokurhweba kunye nokuzimisela ekufumaneni indlela ebhetele yokusula iintsana ezingenaziplastiki kwiiplastiki zasimahla ezinokuphinda zisetyenziswe zeBPA kunye nokusula okugungxulwayo, njl.
UJuan Juan yinkampani enomdla kwezorhwebo, eyonwabela ukukhula okukhulu kunye nabantu abangaphezulu kwama-200 abanetalente abasebenza kunye kwipaki yethu yezamashishini. Ishishini lethu lakhiwe kwizinto ezintsha, kwaye ukuphuhlisa izimvo ezintsha zemveliso kuko okusishukumisela ukuba siqhubele phambili ngeXabiso "Awunako ukuzisula zonke iingxaki zobomi, uphuphe nje ukuba kunokwenzeka"
I-Excellet yokubulala iintsholongwane isula ivela kumgangatho ophezulu welaphu elingalukwanga, ilaphu lethu elingalukwanga liveliswa ziimpawu ezaziwayo ze-A.Celli Group.
Imbali yeqela lika-A. Celli iqala ekupheleni kweMfazwe yesibini (II) yeHlabathi, ngo-1945. Ekuqaleni kweminyaka yoo-1980, usapho lakwaCelli luyaqonda ukuba kunokwenzeka ukuba lusebenzise ubuchwepheshe obuguquke ngakumbi, njengetekhnoloji yephepha, kwicandelo elivelayo nelinomdla njenge Umzi mveliso wee-nonwovens wawusoloko usebenzisa iiwinders kunye ne-slitting rewinders ezivela kwishishini lempahla eyolukiweyo, eyaziwa ngokuba iyacotha kwaye ayomelelanga ngokukodwa.
Ngombulelo kuPuero kunye noMarco Celli's intuition, ngokungenisa iiwinders ezomeleleyo, ezinokuthenjwa neziphezulu, inkampani idibana ngempumelelo kwangoko kwaye abavelisi abaphambili base-Italiya baba ngabathengi bayo.iPantex, i-Tenotex, iFiberweb zezinye zabavelisi abasebenzisa eli thuba. Itekhnoloji entsha yeA.Celli yokwandisa ukusebenza kwemigca kunye nemveliso. A. Cellie egxile ekusongeleni, uqhoqhoqho, ukuphatha umqulu kunye nokupakisha. Uluhlu lwemveliso lubandakanya iinkqubo zokubekwa kweemela ezizenzekelayo, ukusika okuzenzekelayo kunye neenkqubo zokuphatha i-shaft, kunye nemigca emininzi yokusebenza ngokushicilela. A. Celli Nonwovens inika uluhlu olubanzi lweemasters roll rolls kunye ne-slitter-rewinders enezisombululo zikarhulumente ezenziwe ngokwezifiso kwi-spunbond, spunmelt, spunlace kunye ne-airlaid nonwovens roll roll production product.
II.Wet Wipes Oomatshini
Ngaphezulu kweminyaka eli-10, sisebenzise iintlobo ezi-5 zoomatshini bokusula okumanzi, ukuziqhelanisa ngoyena titshala ubalaseleyo, ke siyayiphucula kwaye siyiphucule imigca yemveliso yokusula emanzi kunye nabathengisi bezixhobo zethu ezingaphezulu kweminyaka eli-10. Kule mihla umgangatho wokusula kwethu okumanzi (kubandakanya usula isingxobo kunye nokusetyenziswa okukodwa okusula okumanzi) zezona zizinzileyo kwaye zamkelwe kwimarike. Okwangoku sinemigca esibhozo yemveliso yokusula ngemveliso yemihla ngemihla yeepakethe ezingama-200,000.
Uhlobo lweCosta lokucoca iintsholongwane (ukusula utywala)
Njengoko iqabane oem yobungcali brand ezaziwayo-kakuhle zehlabathi, sinazo umatshini yethu igalelo yokubumba ukwenza iHDPE ibhokisi kunye inaliti umatshini yokubumba ukwenza PP isiciko, imveliso yethu yemihla ngemihla 200,000 iinkonkxa / ezineziciko ngalo mzuzu.
Ayisiyiyo ileyibheli yabucala kuphela, kodwa kunye nokwenziwa kwesiko le-canister kuya kwamkelwa nakwiimpawu zakho.
IV.Umatshini wokuzalisa ulwelo oluzenzekelayo osula iiseyile.
Imveliso yethu ziinkonkxa ezingama-24000 iyure nganye ngokuchaneka kwe-0.1%.
Ngokusebenzisa umatshini wokugcwalisa ngokuzenzekelayo, iodolo enkulu yesosisi esosula iintsholongwane inokufezekiswa ngexesha.
Awunako ukuzisusa zonke iingxaki zobomi, vele uphuphe ukuba kunokwenzeka!